Daawo Sawirrada: Wasiirka arrimaha gudaha oo booqday deegaanno uu ku fatahay wabigga | Baydhabo Online
Daawo Sawirrada: Wasiirka arrimaha gudaha oo booqday deegaanno uu ku fatahay wabigga
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka mudane C/raxmaan Maxamed Xasan Odawaa ayaa maanta Kormeer uu u guur galayay Saameynta Fatahaadda Wabiga ku tagay tuulada Beyxoow oo ka tirsa degmada Jowhar.Kormeerka waxa Wasiirka ku wehliyay Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha dhexe Cali Cabdulaahi Guudlaawe iyagoo gaaray halka uu wabigu ka Fatahay.
Gudoomiyha Tuulada Bayxoow Xaamud Axmed ayaa sheegay in 40 mitir ayuu Jabsaday Wabiga Tuuladan taaso Sababtay inuu Baabiyo dalagyadi ka baxayay dhul beereed dhan 16.000 Hiktar.
“Mudane wasiir wan ku faraxsanahay inaad soo booqatay Meelihi Wabigu uu ka Fatahay ee Tuuladaan Qasaaara Badan ayuu geeystay 16.000 Hiktar Beera abuurna ayuu baabi’yay Fatahaadu Wabiga kaliya halkan maaha Buqdii Hurwaa ayaa ku fatahday Dagmada Mahaday Dagmadda Balse Biyihii ka Baxay Tuugaarey aya sii socdo dhib weyn ayaa Jiro bil ka hor biya yari ayaa dadku dhibaata ku qabeen maantana fahataad” ayuu yiri Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha dhexe Cali Guudlaawe.
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaal Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo Kormeerkan ku Qiimeynayay Fatahaadda Wabiga iyo Cabsida la qabo waxa uu tilmaamy in si dagdag ah wax looga Qabanayo fatahaadda.
“Gudoomiye waad ku Mahadsan tahay inaad na keentay Meeshi fatahaaddu ay ka dhacday walina ay ka socoto waxaan ku dadaalayna inaan wax ka qabano waxaan ugu baaqayna Bulshadda Soomaaliyeed inay wax nagala Qabtaan dhibaatadan Caalamkana waa Gaarsiinayna dhibka Halkan ka jira” ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha.
Sawir qaade C/shakuur Cali Axmed